Ndị na -emepụta ihe nkiri na ndị na -ebubata ihe na -ekpo ọkụ na -agbaze agbaze - China Factory Film Factory
EVA Hot gbazere ihe nrapado maka akpụkpọ ụkwụ
Ihe nkiri nrapado EVA na-agbaze na-enweghị isi, enweghị ụtọ na anaghị egbu egbu. Enwere polymer na-agbaze ala nke bụ ethylene-vinyl acetate copolymer. Agba ya bụ odo na -acha odo odo ma ọ bụ ntụ ntụ ma ọ bụ granular. N'ihi kristal dị ala, mgbatị dị elu, na ụdị rọba, ọ nwere polyethyle zuru ezu ...
L043 bụ ngwaahịa ihe EVA nke dabara maka ịcha microfiber na mpekere EVA, akwa, akwụkwọ na ihe ndị ọzọ. Emepụtara ihe nlereanya a maka ụfọdụ akwa pụrụ iche dịka Oxford clo ...
EVA na -agbaze agbaze ihe nkiri weebụ
W042 bụ mpempe akwụkwọ mpe mpe mpe mpe akwa dị na sistemụ ihe EVA. Site na nnukwu egwu na usoro pụrụ iche, ngwaahịa a na -akpa oke ume. Maka ihe nlereanya a, ọ nwere ọtụtụ ngwa nke ọtụtụ ndị ahịa nabatara. Ọ dị mma maka njikọta nke ...
HA490 bụ ngwaahịa ihe Polyolefin. Ọzọkwa enwere ike ịkọwa ihe nlereanya a dị ka EAA. Ọ bụ ihe nkiri translucent nwere akwụkwọ ewepụtara. Dị ka ọ na -adịkarị, ndị mmadụ na -eji obosara nke 48cm na 50cm nwere ọkpụrụkpụ 100 micron na friji. HA490 dabara maka ijikọ akwa dị iche iche na ihe igwe, ọkachasị ...
PO na -ekpo ọkụ gbazee ihe nrapado ihe nkiri maka friji evaporator
A na -emegharị ya ihe nkiri polyolefin na -agbaze na -enweghị akwụkwọ. Maka arịrịọ ụfọdụ ndị ahịa na ọdịiche nka, ihe nkiri gbazere na -enweghị akwụkwọ wepụtara bụkwa ngwaahịa a nabatara n'ahịa. A na -etinyekarị nkọwapụta a na 200m/mpịakọta ma jupụta na fim afụ na dia dia akwụkwọ 7.6cm. ...
HD112 bụ ihe eji emepụta polyester. Enwere ike iji akwụkwọ mee ma ọ bụ na -enweghị akwụkwọ. Dị ka ọ na -adịkarị, a na -ejikarị ya na mkpuchi aluminom tube ma ọ bụ panel. Anyị na -eme ya obosara nkịtị nke 1m, ekwesịrị ịhazi obosara ọzọ. E nwere ọtụtụ ihe eji eme ihe eji eme ihe a. HD112 ka eji ...
PES ihe nkiri na -agbaze agbaze agbaze
Ọ bụ ihe eji emepụta polyester mere ngwaahịa na akwụkwọ ewepụtara. O nwere mpaghara na-agbaze site na 47-70 ℃, obosara nke 1m nke dabara maka ihe akpụkpọ ụkwụ, uwe, ihe ịchọ mma ụgbọ ala, akwa ụlọ na ubi ndị ọzọ, dị ka baajị ihe mkpuchi. Nke a bụ ihe nrụpụta ihe ọhụrụ nke dị ala ...